काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ९० जनामा संक्रमण पुष्टि, कहाँ कती ? « Jagaran News
काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ९० जनामा संक्रमण पुष्टि, कहाँ कती ?
Published On :9July, 2020 10:37 am
काठमाडौँ — भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको बागेश्वरीका एक पुरुषको साताअघि मृत्यु भयो । पीसीआर परीक्षण गर्दा मृतकको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । अस्पतालका चार जना कर्मचारी र मृतकका श्रीमतीको पीसीआर रिपोर्ट भने पोजिटिभ आयो । संक्रमित कर्मचारीहरू दुवाकोटस्थित केएमसी अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् ।
मृतककी श्रीमती भने घरमै आइसोलेसनमा बसेर श्रीमान्को काजकिरिया गरिरहेकी छन् । ‘अस्पताल भर्ना भएको १२ औं दिनमा श्रीमान्को मृत्यु भयो, हामी अस्पतालबाहेक कहीं गएका थिएनौं, उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उहाँकै स्याहार गर्ने मलाई भने कोरोना देखियो,’ उनले भनिन् ।
ललितपुर चापागाउँका एक पुरुषमा कोरोनाको कुनै लक्षण छैन । आफूलाई कहाँबाट संक्रमण र्सयो भन्ने उनले अड्कलसमेत काट्न सकिरहेका छैनन् । ‘मलाई कोरोनाको लक्षण छैन तर रिपोर्टचाहिँ पोजिटिभ देखिएपछि पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा छु,’ उनले भने ।
ट्राभल हिस्ट्री नभएका उनीहरूजस्तै सामाखुसीका एक पुरुषले गाउँ फर्कन ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर पाटन अस्पतालमा पीसीआर गराएका थिए । उनमा कोरोनाको केही लक्षण थिएन तर मंगलबार टेकुस्थित इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० का कर्मचारीले कोरोना देखिएको भन्दै अस्पताल जान तयारी अवस्थामा बस्न भन्दै फोन गरेपछि झस्किए । ‘त्यसपछि घर बस्न सक्ने अवस्था भएन, सबै आत्तिए,’ उनले भने । २२ दिनअघि पाटनमा उनकी श्रीमती सुत्केरी भएकी थिइन् ।
माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरूको लकडाउनयता आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर कतै गएको इतिहास छैन तर उनीहरू संक्रमित भएका छन् । सोमबार र मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरू आइसोलेसनमा छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु ९ईडीसीडी० ले उनीहरूलाई ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमितको सूचीमा राखेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार ५४ जना, मंगलबार २८ जना र बुधबार २३ जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । ‘यीमध्ये केही ट्राभल हिस्ट्री नभएका छन्,’ महाशाखा प्रमुख डा। वासुदेव पाण्डेले भने, ‘केही विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि छन् ।’
ईडीसीडीले तीनकुने, कपन, भोलाछें, खुसिबु, कागेश्वरी, नख्खु, मैतीदेवी, बोडे, कोटेश्वर, प्युटार, टोखा र शंखमूलमा ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमित भेटिएको भन्दै नमुना परीक्षणलाई व्यापक बनाएको छ । ‘सबैको चासो उपत्यकामा कुन ठाउँमा देखियो भन्ने छ, पछिल्लो समय संक्रमण देखिएको टोल–टोलमा नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ,’ डा। पाण्डेले भने ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा दिनमा २० जनाभन्दा बढी संक्रमित हुँदा पनि सर्वसाधारणले सावधानी नअपनाएकामा चिकित्सकहरू चिन्तित छन् । ‘ट्राभल हिस्ट्री नभएका मानिसलाई संक्रमण देखिएपछि समुदायमा विस्तार भएको त होइन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,’ टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा। अनुप बाँस्तोलाले भने, ‘पहिला स्वास्थ्यभन्दा पैसा ठूलो होइन भनेर घरमै बसे । अब पैसाभन्दा ठूलो स्वास्थ्य होइन भनेर हेलचेक्य्राइँ गरेर निस्कन थालेका छन् । स्वास्थ्य र पैसा दुवै ठूलो हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । संक्रमण कसरी फैलिन्छ ? भन्ने बच्चादेखि बूढाबूढीलाई थाहा छ । सबै सचेत हौं ।’
काठमाडौं बाहिरबाट आउनेलाई घरबेटीले परीक्षण गर्न पठाउँदा, शल्यक्रिया गर्ने बिरामी, अदालत लैजानुपर्ने कैदी बन्दीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना बढेको उनले बताए । – आजको कान्तिपुरबाट